mugdiga iyo Madmadowga ku gedaaman Heshiisyada DPW kuma xalaaloobayaan Somaliya ayaa inoo diidan!.qalinkii A/rahman Fidhinle | Baligubadlemedia.com
mugdiga iyo Madmadowga ku gedaaman Heshiisyada DPW kuma xalaaloobayaan Somaliya ayaa inoo diidan!.qalinkii A/rahman Fidhinle
Shirkada DPWorld waxay Somaliland heshiish la gashay 9/5/2016 taa soo ilaa iyo maanta aan hawl muuqata oo la taaban karo ka qaban Dekedii Berbera oo ay sanad maamuleysay . Hadaba su’aasha qarnigu waxay tahay maxay shirkadu ka qabatay Dekeda Berbera mudadaa sanadka ah ee ay maamulaysay ? Mise waxay la sugaysay Heshiiskan Ethiopia ee ku hoos qarsoonaa heshiiskii Somaliland iyo DPW ay wada galeen 9/8/2016 oo ahaa heshiis 30 sanadood oo ( Bilateral Contract agreements) Waxaana ay ka dhawaajiyeen in heshiiskaas ay ku bixi doonto lacag dhan $442 Million dollar. Waxaana lagu heshiiyey in DPW yeelato saami dhan 65% oo udhiganta lacag ahaan $280 million. Somaliland yeelato Saami dhan 35% oo u dhiganta lacag ahaan $162 Million dollar. Heshiiskan oo aan dhameystirneyn oo ahaa nuxur qabyo qoraal ah ayaa laga ansixiyey Golaha Baarlamaanka Somaliland ka dib markii dhaameel badan loo daadiyey ee ay ku balaloodeen, Sidaas ayaana ay DPW Dekedii Berbera ku hantiday kulana wareegtay taariikhdii 1/3/2017.
Mudadaa sanadka ah Shirkada DPWorld waxay ku fashilantay dhamaan qalabeyntii iyo horumarintii Dekeda Berbera waxaana aad hoos ugu dhacay intii ay maamulka Dekeda hagaysay bedeecadihii ka soo degi jiray iyo heerkii hawl gudashada adeega bulshada ee Dekeda, Waxaa dekeda ka dhacay mudadii ay DPW dekeda maamuleysay shilal iyo khasaare badan oo naf iyo maalba leh, waxaa isku duqeeyey maraakiib Dekeda dhexdeeda, waxaa dab qabsaday Dekeda iyo Maraakiib ku xidhan, waxaana ku dhintay barxada Dekeda laba shaqaale, waxaana ku dhaawacmay shaqaale badan oo aan mag-dhaw la siin.Waxaa iyana shaqadoodii iyo xuquuqdoodiiba ku waayey shaqaale tiro badan oo mudo dheer Dekeda ka xagafsan jiray.
Iyada oo mudaada sanadka ah shirkada DPW ku fashilantay horumarintii Dekeda Berbera ayey hadana Ethiopia inoo soo qeyd xanbaaratay oo heshiiskii uu isu bedelay mid sadex geesood ah. ( Tri-letral contract agreements ) Taas oo dalka Ethiopia la siiyey saami dhan 19% oo 14 % ka mid ah laga soo jaray DPW , Saami kale oo dhan 5% laga soo jaray Somaliland. Heshiiskan waxaa asbuucii la soo dhaafay lagu kala saxeexday dalka U.A. E. Taas oo Saamiyadana loo qeybsaday 51% DPW, 30% Somaliland iyo 19% Ethiopia.
Waxaana lagama maar maan ah in Baarlamaanka la horkeeno heshiiskan cusub si loo ansixiyo.!
Shirkadan lagu magacaabo Dubai Port World ( DPW ) Waa shirkad weyn oo macaash doon ah oo ku caan baxday in ay laba listo oo maal ka urursato Dekedaha dayacan ee qaaradaha aduunka ku filiqsan laakiin waxay ku fashilantay oo fadeexad qaawani ka raacday Dekado badan oo mandaqadeena ku yaala sida: Dekeda Daaroole ee Jabuuti ,Dekeda Sinigaal,Dekeda Lubnaan, Dekeda Cadan iyo Dekeda Indonisia ku waas oo ay dhamaan maxkamado caalami ah isla galeen oo lagaga guuleysatay dacwadii shirkada DPW.
Shirkada DPWorld waxay ku caan baxday in ay kala xado oo kala laaluushto madaxda ay heshiisyada la geleyso waxaa kale oo ay ku caan baxday in ay dabino u daadiso madaxda ay kala xaajoonayso heshiisyada Dekedaha iyada oo isticmaalaysa mar kasta gacan-wadaag, xaqul qalin iyo kala laaluush ay xadhkaha ugu soohanayso si kasta oo ay heshiisyada u kala khiyaamayso sida ay Jabouti ku samaysay, Cadan ku sameysay ee USA lagaga eryey hadana ay damacsan tahay in ay Somaliland oo aan la ictiraafin ku khiyaameyso.
Bal ka warama lacagtii $240 million aheyd ee ay ku balan qaaday in ay ku maalgeliso mashruucii dhismaha wadada Berbera ilaa Wajaable ( Berbera Corridor ) oo ay ku leedahay waxaan awoodaa $80 million dollar oo keliya? Bal ka warama iyada oo aan fulin balan qaadkii heshiiskii ay hore Somaliland ula gashay 9/8/16 ee ay laheyd sanad gudahood ayaanu ku dhisaynaa Dekedii 400 oo mitir ah, ku qalabeynaynaa oo ku dayac tiraynaa Dekedii hore ? Freezone iyo Airportkii madaniga ahaa ayaanu idiin dhisaynaa? ayey iyagu iska dhisteen Dekad Ciidan iyo Saldhig Ciidan oo aynu xaqul qalin yar ka dhaafsanay. Muwaadin ma ogtahay in sanadihii 1981 ilaa 1991 Shirkadii USA ee NASA ay Airporka Berbera oo keliya oo Saldhig Ciidan u ahaan oo weliba Dayaaradaha madaniga ahi la isticmaalayeen ay ku kireysteen lacag dhan $40 Million oo dollar sanadkiiba maantana DPWorld waxay ubadheedheen in ay faro guudkood iyo xaqul qalin yar inaga dhaafsadaan Saldhig Ciidan oo 40 km2 iyo Dekad Ciidan oo Dhererkeedu yahay 50km2. waxaana ay ubadheedheen in ay weliba sheerkoodii qayb Ethiopia ka sii iibiyaan oo hantidii ma guurtada aheyd ee Somaliland ay iyagii sii dilaalaan.
Gunaanad: Waa in nuxurka dhabta ah ee Heshiiska sedexgeesoodka ah Baarlamaanka la hor keenaa si ay uga doodaan una naaqishaan faa’idada iyo khasaaraha uu heshiisku u leeyahay Somaliland. waana lama huraan in caadka iyo ciirada qarsoon ummadda looga qaado mashaariicda badan ee carabka ummadda loogu cel-celiyey ee lagu canqarinaayo ee aan la garaneyn goorta ay bilaabmayaan iyo goobta ay ka bilaabmayaan.